Tropy Jeannette Hahatsiaro sy hanome voninahitra an’i Mamy Rajaonarivelo
Fanaovana hosodoko Tsy ampy ny sehatra ivelarana eto Madagasikara
Velon-taraina ireo mpanao hosodoko eto Madagasikara noho ny tsy fahampian’ny fitaovana. Olana be ihany koa, hoy izy ireo ny tsy fisian’ny sehatra mba ahafahana mivelatra.
Vahoaka malagasy Avereno amin’ny hasiny, hoy ny ABA
Nivalona iny ny taona 2018, tontosa ihany koa ny fifidianana ho filoham-pirenena ary miandry ny valiny avy amin’ny HCC isika.
Light Generation,NTC Gospel sy Messengers Nanampy ankizy sy renim-pianakaviana 200 mahery
Ankizy miisa 105 sy renim-pianakaviana miisa 105 no nisitraka ny asa fanasoavana nataon’ny fandaharana Light Generation sy ny tarika NTC Gospel ary ny Messengers ny zoma lasa teo.
Hiaka-tsehatra ao amin'ny AFT “Alliance Française Andavamamba” indray ny Tropy Jeannette mpilalao teatra Malagasy amin’ny alahady 25 novambra 2018 tolakandro izao hanatanteraka ny Tsiahy an-kira “Souvenirs en Chansons Theatrales”
hahatsiarovana manokana an’i Mamy Rajaonarivelo mpilalao fototra lehilahy andiany faha-3 tao amin’ity tarika ity izay nodimandry ny 20 aogositra 2017. Tsiahivina fa i Mamy Rajaonarivelo dia zanak'i Sylvestre Rajaonarivelo, mpisehatra lehilahy fototra “rôle principal” lehilahy tao amin'ny Tropy Jeannette andiany faha-2 sy Lala Rajaonarivelo izay efa mpilalao teatra ihany koa tao amin'ity tropy ity. Voataiza teo anivon'ny teatra izy, nisehatra anjara madinika “figurant” no niatombohany. Rehefa nodimandry ny rainy dia nandimby azy teo amin'ny fitazonana ny mpisehatra fototra i Mamy ka ny tantara Zanaboromahery nosoratan'i Elizà Freda no nanombohany an’izany. I Ninà Randriamahenina no mpisehatra fototra vehivavy niaraka taminy. Nampalaza azy sy ny Tropy Jeannette ny fahaizany misehatra sy ny fananany feo avo, izay tena ilaina eo amin'ny hira teatraly malagasy.
Hamerina ireo hira tao amin’ireo tantara nolalaovin’i Mamy fahiny ary amin’io fotoana io, ao anatin’ny fizarana faharoa amin’ny fampisehoana, i Kola zanany lahy sy Poussy anabavin-drainy izay efa samy ao amin’ny Tropy Jeannette daholo ankehitriny ary i Lala Rajaonarivelo reniny miaraka amin’ny Tropy Jeannette mazava loatra.
Eo amin’ny fizarana voalohany kosa no hilalaovan’ny Tropy sombin-tseho mandravaka ireo hira teatraly tsy afaka am-bavan'ireo mpankafy ny kalon'ny fahiny nampalaza an' Andrianary Ratianarivo sy Rasamy Gitara samy mpamoron-kira tao amin'ny Tropy Jeannette.